NaingLinHan – Page2– Just For Note
How To Install VirtualBox On Ubuntu — November 2, 2016
November 2, 2016 November 2, 2016 /nainglinhan/Leaveacomment
ဒီနေ့တော့ Ubuntu မှာ virtualbox အသုံးပြုနည်းလေး ရေးပါမယ်။ VirtualBox ကို Operation system တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Guest Os အနေနဲ့ အသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးပါတယ်။ Linux ကို စပြီး အသုံးပြုသူတွေ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာက Windows မှာ အရင်က သုံးနေကျ software တွေ သုံးလို့မရတော့တာပါ။ သူနဲ့ ဆင်တူ software တွေရှိရင် အဆင်ပြေပေမယ့် မရှိရင်တော့ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ Dual တင်ရင်လဲ Linux သွားလိုက် Windows ထဲသွားလိုက်နဲ့ အချိန်ကုန်ပါတယ်။ ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ?? Wine လိုမျိူး Windows က software တွေကို သုံးလို့ရတာမျိူး သုံးမလား?? Wine က software တော်တော်များများနဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ စာဖတ်သူရဲ့ computer က ram4GB နဲ့ အထက်ရှိရင်တော့ VirtualBox ကို သုံးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ Ram2GB လောက်ပဲရှိရင်တော့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။ ရှိတဲ့ ram ကို OS နှစ်ခု တပြိုင်တည်းသုံးသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လေးနေမှာပါ။ Dual တင်လိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။
Create Shortcut in Ubuntu —
Create Shortcut in Ubuntu
November 2, 2016 /nainglinhan/Leaveacomment
Ubuntu မှာ တစ်ချိူ့ software တွေက shortcut မပါပါဘူး command line နဲ့ ရိုက်ပြီး ဖွင့်ရတာမျိူးတွေရှိပါတယ်။ command line တွေရှည်လို့ မမှတ်မိမှာ စိုးရင် shortcut လေးတွေလုပ်ထားပြီး အလွယ်ဖွင့်လို့ရအောင် ဒီလိုလေး လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ ပထမ gnome panel ရှိဖို့လိုပါမယ်။ အရင်က gnome tweak tool သွင်းထားရင် သွင်းစရာမလိုပါဘူး။ မသွင်းရသေးရင်တော့ အောက်က command ရိုက်ပြီးသွင်းပါ။ Continue reading →